Kaalmo garsoor – Personlig Assistans Malmö
Wax­an­nu si lacagla’aan ah oo nati­ijo leh kaa­ga caawin kar­naa xag­ga gar­soor­ka anna­ga oo maan­ta ku farax­san in aqoo­ny­a­ha­na­day­a­da gar­soor­ku ilaa had­da boqol­laal qof ka caawiy­een gaad­his­ta go’aan sax ah. Anna­ga waxa noo muhim ah in xuqu­uq­daa­da la xaqi­i­jiyo oo go’aan lagaa­ga gaad­ho si shar­ci­ga waafaqsan.
Khi­brad­da aan­nu u leen­na­hay dar­teed shar­ciy­a­da uu ka mid yahay shar­ci­ga (1993:387) oo ku saab­san kaal­mayn­ta iyo ade­eg­ga qaar ka mid ah dad­ka lax­aad­koodu kala dima­ny­a­hay (LSS), qaa­nu­un­kaas oo habay­naya mudasha­da kal­kaa­liye gaar­ka ah wax­an­nu kaa caawin karnaa:
Hadi­Ca­re AB way kuu fudu­day­nay­saa arrimahan:Codsiga ugu hor­ray­ba wax­an­nu kaa caawi­nayn­naa xuqu­uq­da aad lee­da­hay ee ku saab­san kal­kaalin­ta gaar­ka ah. In aad samy­sid codsi buuxa oo ku dhi­san in la isu kee­no wax kas­ta oo loo baa­ha­ny­a­hay lana daraa­se­eyo shar­ciy­a­da iyo han­naan­ka cusub ma aha arrin fudud had­dii aan aqoon loo lahayn shar­ciy­a­da kala duwan, taas oo xil­lid­he­er qaa­dan kar­ta kee­ni­na kar­ta in go’aan khal­dan lagaa gaad­ho. Aqoon­ta aan­nu u leen­na­hay arri­ma­ha­ni wax­ay noo fudu­day­nay­saa in aan­nu kaa caawin kar­no geed­disocod­ka cod­si­ga si cod­si­gaa­gu u noq­do mid si sax ah loo qaabeeyey.
Dib u fii­rin mise ka cabasho
Ma wax­ay kuu­la muuqa­taa in aad hes­hay go’aan khal­dan? Had­day sidaa­si jir­to anna­goo ka duu­layn­na mud­naan­ta aan­nu lee­na­hay wax­an­nu kaa caawin kar­naa in wakaa­lad­da cay­mis­ka buls­ha­du (för­säk­rings­kas­san) go’aankeeda assaa­si­ga ah dib u fii­ri­so iyo in aad cabasho ka muu­ji­sid go’aanka wakaa­lad­daa iyo deg­ma­da go’aanka deg­ma­da ee ku saab­san mus­ha­har­ka kal­kaa­liy­a­ha oo aad anbil uga qaa­da­tid max­ka­mad­da maamul­ka (för­valt­nings­rät­ten). Waxa kale oo dhac­da in anbi­il laga qaa­to xukun­ka max­ka­mad­da maamul­ka oo loo gud­biyo max­ka­mad­da sare ee maamul­ka (kam­mar­rät­ten) ama in sidoo kale xukun­ka max­ka­mad­da sare ee maamul­ka anbi­il loo­ga qaa­to max­ka­mad­da ugu sar­ray­sa ee maaul­ka (högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len) xil­li­gaas oo loo baa­han karo codsi loo qoro rafcaan­ka. Dacwad­daa­si wax­ay ku saab­sa­naan kar­taa in aadan helin saaca­di­hii laga yaa­bo in aad xaq u lahayd ee kal­kaalin­ta ama in laguu dii­dey kal­kaalin­tii oo lagu sale­ey­ey assaas khal­dan mar­ka loo eego qaa­nu­un­ka LSS. Anna­ga noo soo gud­bi oo noo daa in aan­nu qaban­no arrin­ka aan­nu ku wanaagsannahay.